CIYAARAHA | warsanradio baydhabo | Page 2
by Siid Cali 29/08/2016
Arsenal ayaa ku dhawaaqi doonta saxiixyada labada ah ee Shkodran Mustafi iyo Lucas Perez berito oo talaado ah sida ay qortay jariiradda Daily Star ee England kasoo baxda. Daafaca Valencia…
Barcelona ayaa hal talaabo u jirta inay dhameystirto heshiiska ay Paco Alcacer kala soo wareegeyso Valencia ka dib markii uu ciyaaryahanka maray saaka tijaabada caafimaadka. Isagoo tijaabada caafimaadka ku maray…
by Siid Cali 25/07/2016
WRB:Kulanka ugu horeeya ee tababare Sam Allardyce ee xulka England ayaa waxa uu ka horimaan doonaa xulka Croatia 1da bisha September. Madaxda xiriirka kubada cagta Ingariiska ayaa u diyaariyay tababaraha…
WRB:Ka hor inta uusan kooxdiisa Real Madrid kula biirin dalka Mareykanka, James Rodroguez ayaa ka hadlay hamigiisa ah inuu ku najaxo Santiago Bernabeu Stadium. 25 jirkaan ayaa kaliya ku soo…
WRB:Kooxda Manchester United ayaa ku dhawaaqday goordhaweyd in kulankii saaxiibtinimo ee koobka International Champions Cup ee duhurnimada maanta dhexmari lahaa iyaga iyo Manchester City in la kansalay sababo la xiriira…
by Siid Cali 17/07/2016
WRB:Kullan aad u xiiso badan oo ka tirsan guruubka A, tartanka Dowlad goboleedyada Soomaaliya ayaa galabta lagu ciyaari doonaa garoonka Banaadir satadium. Ciyaartaan ayaa waxaa isaga hor imaan doono maamul goboleedyada…
WRB:Waxaa si hamsami leh Garoonka Kubadda cagta ee Banaadir satadium uga soconaya tartanka kubadda cagta ee maamul goboleedyada dalka ka jira, iyadoo Jimcihii la soo dhaafay uu daah furay tartankaasi…
WRB: Real Madrid iyo Barcelona ayaa ku dagaalamaya saxiixa xiddiga khadka dhexe ee kooxda Valencia Andre Gomes sida lagu qoray jariirada ka soo baxda Madrid ee AS. Los Blancos ayaa soo…
WRB:Tababaraha cusub ee kooxda Chelsea Antonio Conte ayaa aaminsan inuu ka caawin karo xiddigaha sida Eden Hazard inay gaaraan heerka Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi. Conte oo kooxdiisa ay guuldarro…
WRB:Thierry Henry ayaa qirtay inuu weli ku riyoonayo inuu maalin uun tababare ka noqdo Arsenal. Halyeeyga Arsenal ayaa ka tagay shaqadiisii tababarenimo ee akadeemiga kooxda Arsenal ka dib markii uu…